Isitudiyo saseKhaya esikhululekile kumbindi weSantiago
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMonserrat
Isitudiyo saseKhaya esisembindini woluntu. Kufuphi neemyuziyam, iindawo zokutyela, imivalo kunye nokuzonwabisa.
Isitudiyo saseKhaya esisembindini wesithili saseKhaya. Kufuphi neemyuziyam, iindawo zokutyela, imivalo kunye nokuzonwabisa. Inonxibelelwano oluhle kakhulu kunye nezikhululo ze-metro ezi-2 ezikude nje, iibhasi ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseSantiago kunye namaziko abakhenkethi aneenkonzo zokuqesha kwiindawo ezinomfanekiso wesixeko.
Ifulethi linazo zonke izixhobo zasekhitshini, izixhoma zeempahla, irakhi yetawuli kunye negumbi lokuhlambela, iibhedi kunye neengubo. Inebhedi enezihlalo ezi-2 (ubukhulu be-Queen) kunye nebhedi yesofa.
Inoqhakamshelwano olungcono kunye nezikhululo ezi-2 zemetro ezivaliweyo nje, iibhasi eziya kwisikhululo seenqwelomoya saseSantiago kunye namaziko abakhenkethi aneenkonzo zekontraka eziya kwiindawo ezinophawu esixekweni.
Inonxibelelwano oluhle kakhulu kunye nezikhululo ze-metro ezi-2 ezikude nje, iibhasi ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseSantiago kunye namaziko abakhenkethi aneenkonzo zokuqesha kwiindawo ezinomfanekiso wesixeko.
4.93 ·Izimvo eziyi-129
4.93 · Izimvo eziyi-129
Indawo ezolileyo kakhulu, kufutshane neziko loluntu, iindawo zokutyela kunye nemivalo. Ukufikelela ngokulula kumaziko abakhenkethi nakwiimyuziyam. Ineevenkile ezinkulu ezi-3 kufutshane neflethi. Kufuphi neBarrio Brazil kunye neevenkile zekofu.
Umbuki zindwendwe ngu- Monserrat
Unganditsalela isicelo ngalo lonke ixesha uthanda ukusombulula amathandabuzo akho malunga nefulethi.